Safal Khabar - यी काम गर्नुभएको छ भने मृत्युपछि गइनेछ नर्क
सोमबार, १२ फागुन २०७६ (Monday, 24 February, 2020)
यी काम गर्नुभएको छ भने मृत्युपछि गइनेछ नर्क
सोमबार, २३ भदौ २०७६, ०९ : ११
एजेन्सी । हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित विभिन्न शास्त्रमा मानिसले आफूले गरेका कर्म अनुसारको फल पाउने भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ । अर्थात् मानिसले जस्तो कर्म (काम) गर्छ त्यस्तै फल पाउँछ । मानिस सुखी हुने वा दुःखी हुने, सफल हुने कि असफल हुने भन्ने कुरा कर्मले नै निर्धारण गर्छ ।
त्यसो त गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई पाप लाग्ने भनेर सबै धर्मसँग सम्बन्धित ग्रन्थहरुमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित गरुण पुराणमा नराम्रा काम गर्ने व्यक्ति नर्क जाने भनेर उल्लेख गरिएको छ । गरुड पुराणकै आधारमा हामीले यहाँ केही नराम्रा कामबारे उल्लेख गरेका छौं ।
यस्ता काम गर्दा मानिसको मृत्यु भएपछि उसले नर्कमा जानुपर्ने र त्यहाँ पनि कठोर सजाय भोग्नुपर्ने गरुड पुराणमा उल्लेख छ ।
यी हुन् त्यस्ता कार्य:
नवजात शिशुको हत्या
गरुड पुराणमा नवजात शिशुको हत्या गर्ने ब्यक्ति नर्क जानेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । शिशु हत्यालाई महापाप समेत भनिएको छ । यस्ता मानिसलाई नर्कमा समेत कठोर सजाय मिल्ने उल्लेख छ ।
स्त्रीको अस्मितासँग खेल्ने
स्त्रीका लागि उनको अस्मिता सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । कुनै पुरुषले महिलाको अस्मितामाथि खेलवाड गर्छ भने उक्त पुरुष नर्कमा जाने र त्यहाँ उसलाई कठोर दण्ड मिल्ने गरुड पुराणमा उल्लेख छ । त्यसैगरी गर्भवति महिलाको हत्या गर्नु पनि महापाप रहेको पुराणमा उल्लेख छ ।
आफूलाई विश्वास गर्ने ब्यक्तिलाई विश्वासघात गर्ने ब्यक्ति पनि नगरकगामी हुन्छ । विश्वासघातीलाई नरकमा कठोर सजाय मिल्ने गरुड पुराणमा उल्लेख छ । असल मान्छेलाई धोका दिने र अपशब्द बोल्ने पनि नर्क जान्छन् ।
पूजा भैरहेको स्थानमा नराम्रो काम गर्ने तथा पूजास्थलको अपमान गर्ने व्यक्तिलाई पनि नगरकमा कठोर सजाय मिल्ने गरुड पुराणमा उल्लेख छ । कुनै पनि धार्मिक काम भैरहेको स्थललाई अपमान महापाप भएको पुराणमा उल्लेख छ ।
गरिव तथा अपाङ्गलाई सहयोग नगर्ने
आवश्यक परेका बेला गरिव वा अपाङ्गहरुलाई सहयोग नगर्ने र उपेक्षा गर्नेहरु मृत्यु पछि नरकमा जाने गरुड पुराणमा उल्लेख छ । यस्ता ब्यक्तिलाई पनि नरकमा कठोर सजाय मिल्ने पुराणमा उल्लेख छ ।
पाहुनाको अपमान गर्ने
घर आएका पाहुनाको अपमान गर्ने वा कुनै खानेकुरा नदिइ पठाउनेको पनि मृत्यु पछि नर्कको बास हुने पुराणमा उल्लेख छ । गरुण पुराण भन्छ, ‘घर आएकाहरुलाई विमुख फर्काउनु हुँदैन ।’
अरुको खुसी भंग गर्ने
आफ्नो खुसीको लागि अरुको खुसी भंग गर्ने व्यक्ति पनि मृत्युपछि नरकमा जाने गरुड पुराणमा उल्लेख छ । पुराणमा उल्लेख गरिएअनुसार अरुको खुशी खोस्नेले नरकमा कठोर सजाय पाउँछन् ।
अख्तियारको भेषमा सञ्चार मन्त्रालयमा बाँस्कोटाकै छापा
कस–कसका घेराबन्दीमा छन् त प्रधानमन्त्री ओली ?
सम्पत्ती विवरणमा बाँस्कोटाको सम्पत्ती ४ कोठे घर, १५ लाख ऋण ! मन्त्री छँदा अकुत कमाउन १ खर्बको योजना आफु अनुकुल
१. राष्ट्र जोगाउने जिम्मा काँग्रेसको काँधमा : सभापति देउवा
२. पोल्ट्री एक्स्पोमा प्रविधिलाई प्राथमिकता
३. विद्यार्थीहरुलाई कालापानीसहितको नक्शा पढाउन शिक्षामन्त्रीको आग्रह
४. महानगर प्रमुख रेनु दाहालद्वारा अनसनरत पौडेलसँग भेटवार्ता, समस्या समाधान गर्न पहल भइरहेको जानकारी
५. कोरोना सङ्क्रमणबाट इटालीमा चार जनाको मृत्यु
६. दक्षिण कोरियाका कोरोना फैलिने क्रम तीब्र, सात जनाको मृत्यु, ७६३ जना सङ्क्रमित
७. महाशिवरात्रिमा पशुपतिमा रु ४१ लाखको विशेष पूजा
८. कांग्रेससहित प्रतिपक्षी दलले संसद अवरुद्ध नगर्ने
९. माडीवासीका मागबारे भोलि बैठक बसेर ठोस निर्णय निकाल्ने सहमति
१. अख्तियारको भेषमा सञ्चार मन्त्रालयमा बाँस्कोटाकै छापा
२. कस–कसका घेराबन्दीमा छन् त प्रधानमन्त्री ओली ?
३. सम्पत्ती विवरणमा बाँस्कोटाको सम्पत्ती ४ कोठे घर, १५ लाख ऋण ! मन्त्री छँदा अकुत कमाउन १ खर्बको योजना आफु अनुकुल
४. यस्तो छ पूर्वसभामुख महराको अबको ‘प्लान’
५. चिनियाँ दुतावासले चीन विरोधी ‘सुगा’ भनेका सम्पादकको आजैबाट जागिर चट !
६. प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सहभागी हुन पाएनन् महरा, कारण यस्तो
७. बाँस्कोटा काण्डमा बोले प्रधानमन्त्री